Deegaanka: Wax ku daabac, maamul iyo kor u qaad dhacdooyinkaaga khadka tooska ah | Martech Zone
Deegaanka: Ku daabac, maamul oo kor ugu qaad dhacdooyinkaaga khadka tooska ah
Talaado, Febraayo 7, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Suuqleyda ayaa adeegsanaya dhacdooyinka in ka badan sidii hore, saameyntuna waa mid muuqata. Xaqiiqdii, suuqleyda waxay ku qiimeeyaan meheradaha iyo dhacdooyinka xeeladdooda labaad ee ugu wax ku oolka badan ka dib bogga shabakadda Dhacdooyinka waxay gacan ka geystaan ​​keenista hoggaamiyeyaal cusub, u beddelaan rajooyinka xiisaha leh macaamiisha, iyo si fiican u sharxaan sheyga ama adeegga waqtiga dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, suuqleyda badani waxay la halgamayaan oo keliya inaysan ka faa'iideysan dhacdooyinka awoodda isku dhafan, laakiin sidoo kale inay fahmaan oo ay cabbiraan sida ay u wadaan iibka, wacyigelinta sumcadda, ka-qaybgalka, iyo inbadan. Sidaa darteed, dhacdooyinka waxay u taagan yihiin nooc ka mid ah Wild West ee suuqleyda.
Dhacdooyinka ayaa ah isu-imaatin-sannadeedka loogu talagalay inbadan oo farsamada ah, laga bilaabo Salesforce's DreamForce shir loogu Bandhigga Macaamiisha Elektaroniga Caalamiga ah (CES). Waxay xitaa caan ku yihiin suuqgeynta (ka fikir MozCon iyo Soo Galida Hubspot isu imaatin). Noocyada sida Pepsi iyo Prudential martigelinta munaasabadaha si ay si qoto dheer ugu xirmaan macaamiisha una soo saaraan wacyigelin nooc ah. Tusaale ahaan, Prudential's 4.01K "Race for Hawlgab" wuxuu ku bilaabmay sidii macaamiil soo foodsaartay dhacdo wuxuuna si dhakhso leh ugu kordhay olole suuqgeyn oo xawli ku socda shirkadda guusheeda darteed. Kadibna waxaa jira dhacdooyin sida South by Southwest (SXSW), oo isu keena sumado, macaamiil, iyo waxqabadleyno.
Haddii aad tahay suuqgeeye, waxay u badan tahay inaad miisaaniyad u leedahay dhacdooyinka - iyo sabab wanaagsan. Boqolkiiba sagaashan iyo lix macaamiisha khibrada weyn u leh munaasabad ayaa u janjeera inay iibsadaan dhacdooyinka Maanta ayaa ka badan kaliya kulamada, hase yeeshe; waa shindigyo casri ah oo leh qorshooyin suuq geyn adag. Suuqyayaashu waxay ku daraan wax kasta oo ka yimaada Isgaadhsiinta dhow (NFCs) illaa Aqoonsiga Raadiyaha-Soo-noqnoqodka (RFIDs), iyagoo adeegsanaya teknoolojiyadaan goos gooska ah si ay ula socdaan, u qaabeeyaan, una horumariyaan dhacdooyinkooda dhammaan dhibcaha meertada nolosha.
Laakiin sidee ayay shirkaduhu u faafiyeen warka ku saabsan dhacdooyinkooda? Dhacdooyinka waxaa lagu daabici karaa websaydhka shirkadda, warbaahinta bulshada, email ahaan, ama qaabab kale oo badan. Mid kasta oo ka mid ah wargeysyadan waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo qasaarooyinkooda, laakiin waxay weli dareemayaan inay jiraan wax ka dhiman. Kawaran haddii ay jiri lahayd hal meel oo ay suuqleydu u aadi karaan inay ku dhiirrigeliyaan dhammaan dhacdooyinkooda khadka tooska ah? Waxaa jira - waxaa loogu yeeraa kalandarka dhacdooyinka.
Markaad maqasho jadwalka munaasabada, waxaad u maleyneysaa inaad ka fekerayso jadwalka taleefoonka 30-maalmood ee gridka ah. Waxay ku soo bandhigeysaa faahfaahinta iyo macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka si aan macquul ahayn ka dibna waa inaad dadka u jiido jadwalkaaga si aad wax badan uga baratid. Si kastaba ha noqotee, kalandarrada dhacdooyinka is-dhexgalka ee maanta waa aalado suuqgeyn xoog leh oo gacan ka geysta wadista taraafikada, xaadiritaanka, iyo ka warqabka dhacdooyinkaaga. Gali Deegaanka, BFF-kaaga cusub.
Jadwalka dhacdooyinka isdhexgalka ee deegaanka ayaa ah hal dukaan-joog ah oo ka caawiya suuqleyda inay si fudud u daabacaan, u maareeyaan una dhiirrigeliyaan dhacdooyinkooda khadka tooska ah, dhammaantood hal meel. Deegaanka waxay bixisaa astaamo cusub, oo ay ka mid yihiin:
Bogagga degitaanka shaqsiyeed dhacdo kasta, goob, iyo koox kor u qaadista tirooyinka bogga iyo hagaajinta Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO).
Is dhex galka baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter, oo u oggolaanaya maamullada munaasabadda inay la socdaan doodaha dhacdadooda una oggolaada dhagaystayaasha inay si fudud ula wadaagaan qorshooyinka dhacdooyinka asxaabtooda.
Falanqeeyaha dhacdada dhamaadka-dambes, taas oo u suurtagelisa maamullada inay la socdaan ka soo qayb galka, tabta ku haysa bulshada bulshada, iyo qiyaasta falcelinta dhagaystayaasha ka hor dhacdo.
Calaamadeyn Gaar ah, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u geliso muuqaalkaaga iyo dareemadiisa, iyadoo astaantaada aad ka dhigeyso hore iyo bartamaha.
API awood leh, oo ku xira tiknoolajiyada dhacdooyinka kala duwan si ay isugu xiraan khibradahaaga dhacdooyinka.
Qofka maxalliga ah wuxuu xalliyaa dhibaatada kordhinta soo noqoshadaada dhacdooyinka isagoo abuuraya waxyaabo dhacdo shaqsiyeed loo adeegsan karo si firfircoon loogu suuq geeyo dhacdooyinkaaga, ha ahaato iyada oo loo marayo dhiirrigelinta bulshada, suuqgeynta waxyaabaha, ama kanaalka suuqgeynta kale.
Marka loo eego bogagga degitaanka shaqsiyeed ee dhacdo kasta, goob kasta, iyo koox kasta, Localist wuxuu abuuraa waxyaabo SEO-saaxiibtinimo leh oo dib loogu soo celin karo suuqgeynta kanaalkaaga oo dhan. Waxaad durba u socotaa dadaalka aad ku abuureyso dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay si aad ugu dhejiso dhacdadaada; Maxay u oggolaanaysaa inay ku fadhiisato hawl la'aan bogga marka aad u isticmaali karto isla macluumaadkaas si aad ugu kasbato kaqeybgalayaasha cusub iyo xitaa macaamiisha?
Tiknoolajiyada maxalliga ah waxay ka caawisaa suuqleyda inay sida ugu habboon uga faa'iideystaan ​​dhacdooyinkooda, iyagoo adeegsanaya jadwalka mashiin suuqgeyn adag leh Boggeeda SEO-saaxiibtinimo leh, sumadeyn gaar ah, iyo gadaal-dhamaadka Analytics ku siinayaa qalabka aad u baahan tahay si aad calaamado uga dhex sameyso dhacdooyinkaaga, dhammaantoodna ku wada yaallo hal meel, oo leh is-dhexgal si fudud loo adeegsado.
Si aad waxbadan ubarato iskuna daydo Localist naftaada, booqo Localist.com oo bilaw tijaabo bilaash ah maanta.
Bilaw Maxkamadeyntaada Maxaliga ah ee Bilaashka ah Maanta
Tags: markaassuuq-geynta suuqasoo galitaanka hubspotshirka soo galabandhig elektaroniga macaamiisha caalamiga ahmaxali ahShirarka Suuqgeyntamozconkor u qaad dhacdooyinka khadka tooska ahiibka riyooyinkakoonfur koonfur galbeedSXSW
Vungle: Lacag uga samee barnaamijkaaga moobaylka fiidiyowyo ku jira App-ka
Sida ay Suuqleyda B2B Ugu Talo Galayaan Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Mawduucooda